Isifo sikashukela - a ... Diagnostics, engcupheni, izimbangela, ukwelashwa
Isifo sikashukela - ukugula okungathí sina, okungase ahlupheke kokubili abadala nezingane ngokufanayo. It kungukuphula umsebenzi pancreatic, kuphumele waphawula kashukela ephezulu. Lokhu kuholela eziyingozi kakhulu, eziningi zazo azivumelani ukuphila.
Isifo sikashukela: Definition
Okokuqala ukuqonda ezinye magama. Kuyini isifo sikashukela? Lesi sifo, okuyinto kuhambisana esephule amanzi-usawoti namaminerali umzimba, umzimba carbohydrate, amaprotheni namafutha emzimbeni. Ukungadli okunjalo kwenzeka ngenxa yokuhluleka kwamanyikwe, okuyinto ngasizathu simbe iyeke ukukhiqiza ngokugcwele-insulini i-hormone. Kuyinto le hormone obangela igazi glucose ezingeni lomuntu. Mellitus - isifo ngofuzo noma atholwe. It has ezingamahlalakhona. Kuze kube sekupheleni akunakwenzeka ukwelapha, odokotela bazama konke okusemandleni abo ukuba asebenze ngokuzimisela ukuze kuboshwe isifo noma ukunciphisa yezinkinga kungenzeka.
Yeka indlela okuyingozi kuyinto sikashukela?
Umuntu onesifo sikashukela, igazi glucose yanda, futhi amazinga insulin yehlile. Ezimweni eziphambili njengoba kunqunywe ushukela kule umchamo. Lokhu kungaholela izilonda, isifo sokuqina kwemithambo yegazi, umfutho ophakeme wegazi, ukulimala kwezinso, isimiso sezinzwa esiyinhloko, iso amaconsi. Njengoba ubona, isifo sikashukela - isifo esiyingozi. Ngakho-ke, ungavumeli ke busebenze.
Odokotela ukuhlukanisa engcupheni yesifo sikashukela:
Ukuhlukunyezwa iziphuzo okunoshukela.
Umfutho ophakeme wegazi.
Konke lokhu engcupheni yesifo sikashukela kungaholela ziwohloke zisesimweni lesiguli. Ngakho-ke, kubalulekile ukuba bagcine umbuso kosuku, ukudla ngendlela efanele, ukugwema ukuhlala ucindezelekile, bahlanganyele athole ukwelashwa komzimba. Kubalulekile ukukhumbula ukuthi sikashukela - lokhu akulona umusho. Ukwelashwa kusenesikhathi kungakusiza.
Yini odokotela beluleka
Iziguli isithakazelo yemvelo: "? Okufanele ukwenze sikashukela" Ukuze siphendule lo mbuzo, kumelwe kancane uya phambili ku isihloko.
Hlukanisa sikashukela 1 nesikashukela soHlobo 2. Esikhathini Uhlobo lokuqala umuntu eba ngokuphelele insulini engaphansi, kanti eyesibili - akukho. Ukwelashwa abanesifo sikashukela sohlobo 2 siqukethe ongaphakeme-carbohydrate Ukudla, elashwe ngokomzimba futhi ngamaphilisi ukwandisa insulini ukuzwela. Kwezinye izimo, imijovo oqondile we-insulin.
Yini kufanele ngesabe
Odokotela baxwayisa ngokuthi kubalulekile ukuze bazame ukuvimbela ukuba ngenxa yezinkinga uhlobo 2 sikashukela. Lesi sifo kungabangela ukuthuthukiswa izifo ezifana Hyperglycemia, gipoglekimiya, peripheral, ophthalmopathy, arthropathy, phakathi okuyinto kubalulekile dwebela angiopathy sikashukela. Yilokho kuyingozi sikashukela! Lokho comorbidities amaningi kungaholela eziya ziba zimbi kwesimiso lesiguli. Izinkinga of ngifundise ngesifo sikashukela sohlobo 2 - hhayi umusho endabeni uphethwe ngesikhathi esifanele kanye nokwelashwa.
angiopathy Diabetic - isifo esiyingozi lapho kwenzeka njengoba inkinga e abantu abaphethwe isifo sikashukela uhlobo lokuqala noma lesibili. Uma umuntu egula iminyaka engaphezu kuka-5, kungenzeka, angiopathy sikashukela sekuqalile ukuthuthukisa. Ngakho-ke, kudingeka ucabange mayelana nokwelashwa, kunokuba zokuvimbela yayo.
Lokhu inkinga kubonakala ukulahlekelwa kancane kancane patency kwemithambo yegazi. Esekelwe indawo umkhumbi ethintekile, sikwazi ukukhuluma enkingeni ngezidumbu ezilandelayo:
Izimbangela angiopathy sikashukela
Isizathu esikhulu lesi sifo nemiphumela emibi kashukela ephezulu, okuyinto ibulala izindonga capillary, imithambo yegazi. Izindonga kungenziwa zikhubazekile, izacile noma mkhulu, okuyinto kuvimbela evamile igazi ukugeleza futhi umzimba jikelele. ukuhluleka okunjalo kuholela ekuphikeni hypoxia (yokushodelwa umoya emzimbeni) ezicutshini futhi izibilini lesion nesineke.
Izinhlobo nezimpawu angiopathy sikashukela
Kwezokwelapha, ihlukanisa 2 izinhlobo lesi sifo:
macroangiopathy - isifo esithinta imithambo kanye emithanjeni;
microangiopathy - isifo esithinta ama-capillary.
Kukholakala ukuthi ukusetshenziswa insulini zivikela angiopathy, lapho u-80% amacala ekufeni noma ukukhubazeka isiguli. Kodwa lokhu akulona icala.
Izimpawu ze-semithambo Macro futhi microangiopathy ezahlukene futhi abe izigaba eziningana ukuthuthukiswa.
Izigaba ukuthuthukiswa macroangiopathy:
Isigaba 1 - isiguli siqala ukuba nenze kalula, isipiliyoni ukuqina ukunyakaza kwakhe, izinzwane kukhona ndikindiki, izipikili - mkhulu. Izinyawo ukujuluka futhi njalo iqhwa. Kwangathi ukuthuthukisa claudication ngakanye (ngezikhawu kungenzeka engafinyelela kwengu-1 km).
Isinyathelo 2A - isiguli ekhononda yokulimala ezinyawo nasemilenzeni uqale ukuzizwa abandayo ngisho ehlobo. Skin emikhawulweni eliphaphathekile claudication ngakanye uqala kwenzeke ngezikhawu ezincane - 200-500 m.
Isinyathelo 2b - izimpawu zihlala zinjalo, kodwa claudication ngakanye uqala kwenzeke ngokusebenzisa amabanga amancane - 50-200 m.
Isinyathelo 3a - izimpawu ziqale zibe zimbi nakakhulu, wanezela ubuhlungu emilenzeni, okuyinto ephazamisa kakhulu ebusuku. Skin iba eliphaphathekile; izinzwane uqale ukuthola umbala bluish, uma eside kakhulu emi noma ukuhlala. Isikhumba iqala ikhasi off futhi omile, ngakanye claudication iqale kwenzeke 50 m.
3b esiteji - ubuhlungu isiqala ukuba okuqhubekayo, futhi zingavuvukalanga kakhulu nemilenze aphansi. amathuba Huge izilonda ezingase zibe necrosis.
Isigaba 4 - necrosis umunwe noma unyawo, okuyinto kuhambisana ubuthakathaka, izinga lokushisa eliphakeme (focus ezithathelwanayo kwenzeka emzimbeni).
Ukuthuthukiswa microangiopathy libhekene 6 degrees:
0 degree - izikhalazo kwi ingxenye nesineke siyenzeka. Thola isifo kungaba udokotela.
1 degree - isiguli ekhononda umlenze isikhumba paleness futhi umuzwa abandayo. Ungezwa izilonda ezincane ezingenziwanga ephelezelwa soreness noma imfiva.
2 degree - izilonda uqale hit ithambo, imisipha; sebuhlungwini obunzima.
Ibanga 3 - emaphethelweni bese phansi izilonda, amnyama, okubonisa necrosis. Ezindaweni ezithintekile izilonda ziqala ukuba sikhukhumale redden. Kukhona amathuba enkulu yokuba umnkantsha ukuvuvukala izicubu (osteomyelitis), abscesses nezifo ubovu isikhumba (abscesses).
4 degree - necrosis neminwe noma ezinye izingxenye unyawo.
5 degree - necrosis kudlulela lonke unyawo, okuholela ukunqunywa ngokushesha.
Ukuxilongwa kanye nokwelashwa of angiopathy sikashukela
Izimpawu kanye nezikhalo nesineke akuzona nsuku kumanele uphethwe ukuthethwa kwecala. Ngakho-ke, udokotela ekunika ukuqokwa lenqubo elandelayo zokuxilonga:
Assays sokunquma ezingeni ushukela egazini kanye nomchamo.
Angiography --X-ray luhlolo indlela usebenzisa isimo semithambo umehluko ejenti.
Doppler scan - izitsha ultrasound usebenzisa inzwa Doppler, elibonisa enomopho ngokusebenzisa izitsha.
Ukunqunywa okusizwa ukushaya semithambo.
Imiphumela yaloku kuhlola okungenhla Esifike Ngesikhathi kanye nokwelashwa okwalandela kungavimbela esibhibhayo futhi ukunqunywa ukuthuthukiswa. angiopathy Diabetic eba phezu kweminyaka eminingana. Endabeni non-ukuhambisana zonke izidingo udokotela ukuba khona, kukhona amathuba olukhulu ukukhubazeka kanye nokufa imbala.
Manje kukhona amasu amaningana zenzelwe ekwelapheni lesi sifo. ukwelashwa okujwayelekile ihlanganisa statin kanye Antioxidants. Ngokwesibonelo, "simvastatin" noma "atorvastatin", futhi vitamin E. Kubalulekile futhi ubuyisele umzimba efanele ezicutshini. Ukuze wenze lokhu, lo Udokotela angase anikeze isiguli "Mildronat", "Thiotriazoline" noma "Trimetazidine". Lokunye lokubaluleke kakhulu ukuqashwa kukaNksz stimulators biogenic (FiBS, Aloe) kanye angioprotectors ( "Parmidin", "Dicynone" noma "Anginin"). Udokotela wakho angase akunikeze "Heparin", "clopidogrel" noma "Cardiomagnyl" ukuthi mncane igazi kanye ukuvimbela amahlule zingcwecwe.
Uma uphethwe wenziwa isikhathi, futhi lesi sifo sitholakale kusaqalwa, isiguli ezinqunyiwe umzimba (obonisa Burger kanye nokuhamba emfushane).
I upokisi uswidi ezinganeni eRussia nakwamanye amazwe?
Ehlombe ukulimala ekwindla: ukwelashwa. Wamafutha for nemivimbo ukulimala
Kungani njengokubatshwa kwezindlebe zabo, imilenze ngezansi kwamadolo? Ubangela izimpawu
Dysbiosis emathunjini - Ukwelashwa Prevention and
PVC Siding: incazelo kanye nokubuyekeza
Uyini ukuqapha intela? ukuqapha komthetho intela
Proctology - kuyini, ikakhulukazi ekwelapheni izimpawu nezifo
Asiye Italy! Pisa ezikhangayo
Uchungechunge lwezihloko ezithi "Knick": nabalingisi izindima
RPK-74. Kalashnikov machine gun (RPK) - 74: izici. isithombe
Ukubekezela ukuhlukunyezwa noma cha?
Cat Albino: incazelo ubunjalo kanye nezici okuqukethwe. albino isakhi sofuzo
Sibhedlela eduze eMoscow: simo we ukuzilibazisa engcono
Utamatisi "Cranberries ushukela" - nokubuyekeza amakhasimende. Ukukhula ukunakekela utamatisi izinhlobo "Cranberries ushukela"